Dawladda Gabon oo dib u dhigtay doorasho ka dhici lahayd dalkaas bishaan Desembar – The Voice of Northeastern Kenya
Dawladda Gabon oo dib u dhigtay doorasho ka dhici lahayd dalkaas bishaan Desembar
Star FM December 3, 2016
Dawladda Gabon ayaa sheegtay in ay dib u dhigtay doorasho lagu waday in ay dalkaas ka dhacdo biishan desembar iyadoo sheegtay in doorashadaas ay qabsoomi doonto bisha July ee sanadka inagu oo aadan ee 2017-ka.
Dawladda ayaa talaabada ay dib ugu dhigeeyso doorashada u aaneysay lacag la’aan la soo daristay waxana shaaca ka qaaday arrintaas maanta oo sabti ah wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaas.
Go’ankaas ayay dawladda qaaday kadib markii codsi ku aadan dib u dhigista doorashadaas ay ka heshay gudiga doorashooyinka waxana hadda la shaaciyay in ay doorashadaas ay dhici doonto 29-ka bisha July ee sanadka 2017-ka.
Waddankan oo kamid ah waddamada soo saara saliida ayaa waxa lagu wadaa in ay qabtaan cayaaraha qaramada Africa kuwaas oo bilaabmi doono bisha Januari ee sanadka soo socda waxana dadka ka faalooda siyaasada dalkaas ay sheegayan in ay taas sabab u noqon karto in dib u dhac u ku yimaado doorashada.
← Arday dhan 226,000 oo laga yaabo in ay seegan fasalka 1-aad
Brazil oo maanta laga soo dajiyay meydadka dadki ku geeriyooday shilka diyaarada →